ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပါအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
တစ်ပါးတည်းသော အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်
မေ ၂၅, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
News Code : 317632
Source : MSM
ဟဇရသ်မူစာ(အ)တစ်နေ့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှအမိန့်ပညတ်ချက်များယူဆောင်ရန်အတွက် သူးရ်တောင်ပေါ်သို့ သွားနေတယ်. လမ်းမှာလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်.ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအရမ်းပေါများနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်.အဲဒီလူက “အို.မူစာသခင် ...
အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) သတင်းဌာနအဗ်နာ မှ MSM SITE မှတဆင့် အောက်ပါအတိုင်းတိုက်ရိုက်ကူးယူဖော်လိုက်ပါသည်။
ဟဇရသ်မူစာ(အ)တစ်နေ့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှအမိန့်ပညတ်ချက်များယူဆောင်ရန်အတွက် သူးရ်တောင်ပေါ်သို့ သွားနေတယ်. လမ်းမှာလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်.ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအရမ်းပေါများနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်.အဲဒီလူက
ပက်သက်ပြီး ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလျှောက်ထားပေးခဲ့ပါ” လို့ပြောတယ်.. မူစာ(အ)ကကောင်းပြီဆိုပြီးရှေ့ ဆက်သွားတော့ နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တယ်. အဲဒီသူဆီမှာတော့ဝတ်စရာအ၀တ်အစားတောင်မရှိတော့လို့ အရှက်ကိုသဲနဲ့ဖုံးပြီးထိုင်နေရတဲ့အခြေအနေပါ. သူကလည်းတမန်တော်မူစာ(အ)ကို လျှောက်ထားပါတယ်.
“အို.မူစာသခင် အလ္လာဟ်ထံတော်ပါးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့စကားလေးကိုသတိတရပြောပေးပါ.ကျွန်တော့်ဘယ်လောက်ဆင်းရဲနေသလဲဆိုရင်ဝတ်စရာ
လဲဆိုတာလျှောက်ထားခဲ့ပေးပါ” မူစာ(အ)သူးရ်တောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားတော့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်က မူစာ(အ)ကိုအမိန့်တွေမှာကြားပြီးတဲ့အခါမှာ မူစာ(အ)က ဟိုပုဂ္ဂိလ်နှစ်ယောက်ရဲ့မှာကြားချက်တွေကိုလျှောက်ထားလိုက်တယ်.ပထမလူနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်က “ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအရမ်းများနေတယ်ဆိုရင်အများကြီးလုပ်စရာမလိုဘူး တစ်ခုပါပဲ..ငါပေးထားတဲ့စည်းစိမ်တွေနဲ့ပက်သက်ပြီးကျေးဇူးကန်းပါ.” လို့ဆိုခဲ့တယ်.ဒုတိယလူနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ “၀တ်စရာအ၀တ်တောင်မရှိဘူးဆိုရင်အဲဒီသူကိုပြောပါ.ငါ့အရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး
အမြဲတမ်းကျးဇူးတင်လျှက်ရှိနေပါ.” လို့ဆိုလိုက်တယ်.မူစာ(အ)ပြန်လာတဲ့အခါမှာ ပထမလူနဲ့ပြန်တွေ့တော့ အဲဒီသူကိုပြောလိုက်တယ်.အရှင်မြတ်သခင်ကမိန့်လိုက်ပါတယ်.. အသင့်မှာစည်းစိမ်တွေအရမ်းများနေတယ်ဆိုရင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးကန်းလိုက်ပါ.တဖြည်းဖြည်းနဲ့စည်းစိမ်တွေကုန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့